‘सबै प्रदेशका लोकप्रिय गन्तब्यमा आकर्षक भ्रमण प्याकेज आउँदैछ’ : नाट्टाका अध्यक्ष गुरागाइ || अन्तवार्ता
‘सबै प्रदेशका लोकप्रिय गन्तब्यमा आकर्षक भ्रमण प्याकेज आउँदैछ’ : नाट्टाका अध्यक्ष गुरागाइ
हरेक प्रदेशमा घुम्नलायक स्थान छनोट गरी आकर्षक प्याकेज बनिरहेका छन् कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै ११ चैत २०७६ मा सरकारले देशव्यापी लकडाउन शुरु गर्‍यो । धुमधामसाथ भ्रमण वर्ष प्रारम्भ भएको तेस्रो महिनामै शुरु भएको प्रतिवन्ध अहिले सम्म पनि कायम छ । यो बीचमा भ्रमण वर्ष त रद्द भयो नै, मनग्य मुनाफा कमाउने उद्देश्यसहित पर्यटन क्षेत्रमा आएको ठूलो लगानी समेत संकटमा पर्‍यो ।
तर, अझै निश्चित छैन । यो समय कति परसम्म लम्बिने हो । यस्तै अनिश्चयका बीच पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् पर्यटन व्यवसायी । हरेक संकटका बीचमा पनि एउटा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै पर्यटनमा आन्तरिक घुमफिरको माहौल देखिएको छ ।
मानिसहरु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा घुमफिरमा निस्कन लागेका छन् । यसले के पर्यटनलाई राहत दिन्छ ? आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? पर्यटनलाई साविककै अवस्थामा ल्याउन आन्तरिक पर्यटन वरदान सावित होला ? यी नै जिज्ञासासहित नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाँई सँग गरेको कुराकानीको सार:
पर्यटन व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो ? अहिलेको अवस्था के छ ?
पर्यटन व्यवसाय ठूलो रोजगारी उपलब्ध गराउन सफल क्षेत्र समेत हो । अहिले यस क्षेत्रमा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराएर टिकाइराख्नु पनि हामी व्यवसायीहरुलाई निकै गाह्रो छ । त्यतिमात्र होइन, हामीले पुःन पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ तवरले माथि उठाउनुछ । हरेक जटिल परिस्थिति पश्चात् केही सम्भावना पनि सँगसँगै आएको हुन्छ । केवल त्यसलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको यस अवस्थाले पनि हामीलाई थप सशक्त बन्न प्रोत्साहित नै गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अवस्थामा छ, कस्तो छ माहौल ?
चलायमान नै त भइसकेको अवस्था छैन । तर, अब पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै खुल्ने सम्भावना छ कि भन्ने सकारात्मक सन्देश आएको छ । यो पनि व्यवसायीको जागरुकताले नै यस्तो वातावरण बनाएको हो । किनकी अहिले नि सरकारको निर्णय स्पष्ट र अलि छिटो आउन सकेको छैन ।
एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ । जसले गर्दा केही निर्णय विवादास्पद समेत हुने गरेका छन । यसले हामी पर्यटनमा लागेका धेरै जनालाई अन्यौल बनाएको छ । यसो हुनुमा महामारीको कारण पनि हुन सक्छ । किनकी यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको विषय पनि हो । व्यवसायीको निरन्तरको दवावपछि सरकारले पर्यटन क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, अहिले पनि अवरोध भने कायम नै छन् । भारतमा उडानमाथि अझै प्रतिवन्ध छ । कतिसम्म भने भारतले चार्टर उडान समेत रद्द गरेको अवस्था छ । एक किसिमले भन्ने हो भने निर्णय र कार्यान्वयनका बीचमा लुकामारी खेलेको जस्तो अवस्था छ । निर्णयमा खुलेको भए पनि अन्य मुलुकका प्रावधान र नियमका कारण समेत हामीले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । यसमा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
धेरै मुलुकको सवालमा यस्तै भइरहेको छ । नेपालमा कहिलेबाट सरल रुपमा भिसा पाईन्छ भनेर निरन्तर जिज्ञासा आइरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अहिले वायुसेवा कम्पनीहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिएर बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भिसा सहजिकरणको वातावरण बनाउनु पर्छ । निर्णयहरु स्पष्ट नहुने समेत अन्यौल हुनेगर्छ । तर आशा गरौं, निकट भविश्यमा सबै सकारात्मक दिशामा अगाडी बढ्नेछ ।
विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार विदेशबाट आएका व्यक्ति नेपाल आइसकेपछि १४ दिन क्वारेन्टिन बस्नु पर्छ । यो पर्यटकको हकमा पनि लागु हुन्छ । यसअघि ७ दिन क्वारेन्टिनको प्रावधान थियो । क्वारेन्टिनको विषय अहिले पनि अन्यौलमै छ । सोहीकारण सोचेजती संख्यामा पर्यटक आउने वातावरण बनेको छैन । किनकी १४ दिन होटेलमा बसेपछि घुमफिरमा निस्कने गरी कुनै पनि पर्यटक आउन सक्दैन ।
अहिलेसम्म आएका विदेशी पनि केही विशेष काम र नगन्य मात्र पदयात्रामा जान आएका हुन् । सरकारको विशेष अनुमतिमा पर्वतारोहणमा पनि केही पर्यटक आए । यो ज्यादै सानो संख्या हो । यसले पुग्दैन । व्यवसायीले तीन दिन क्वारेन्टिनको माग गरिरहेका छौं ।
पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव ५ दिनको रहेको छ । पिसिआर परिक्षण विमानस्थलमै गर्ने र तीन दिन क्वारेन्टिनमा राखेर सम्बन्धित गन्तब्यका लागि अनुमति दिने नीति बढाउने हो भने केही न केही मात्रामा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । तर, अवरोध मात्र हुने हो भने तत्काल विदेशी पर्यटक आउन सक्दैनन् ।
दैनिक कति जति संख्यामा विदेशी आउँछन् होला ?
यो संख्या त एकदमै कम छ । अब पदयात्राको सिजन समेत सकिन लागेका कारण पर्यटक आगमन कम हुन्छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्सहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी नियमित सरल रुपमा उडान गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
उनीहरुले आफ्ना लागि यात्रु आफै खोज्छन् । सरल नहुन्जेल जोखिम मोलेर कुनै पनि पर्यटक घुमफिरमा अर्को मुलुकमा जाँदैन । त्यसकारण सरकारले नेपाल आईरहेका विदेशी एयरलाइन्सलाई नियमित नेपाल उडानको वातावरण बनाउनु पर्छ । ताकी उनीहरुले गन्तब्य परिवर्तन नगरुन । भोली नेपाल गन्तब्य एयरलाइन्सको रोजाईमा परेन भने त्यो नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि क्षति हुन सक्छ ।
यस बिचमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सरकार र निजी दुबै क्षेत्रले उत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ । के भइरहेको छ यता ?
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जति काम हुनपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । किनकी यहि समयमा हामी चाडवाडमा व्यस्त भयौं । हामीले दशैं अघि नै एउटा प्याकेज सहित काम गरेको भए अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका साथिहरु पनि कोरोना संक्रमित भएर बस्नुभयो । केही ढिलो त भयो । तर पनि हामी हरेक प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रचारप्रसार गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं । हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुको पछाडी भोलि फेरी यस्तो अर्को महामारी आयो भने पनि आन्तरिक पर्यटनबाट जीवनयापन भइरहन्छ भन्ने अपेक्षा हो । यो नेपाली पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले पनि मनन् गरेका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
आन्तरिक पर्यटनमा बढी सम्भावना बोकेका गन्तव्य कुन हुन् ?
साविकदेखि नै चर्चामा रहेका गन्तब्यमा स्वभाविक रुपमा मानिस जान चाहन्छन् । कम खर्च, पर्याप्त हेर्नलायक उत्पादन, सहज पहुँच भएको ठाउँमै मानिस गइरहेका छन् । अहिले पोखरा, चितवन, बन्दिपुर, नगरकोट, धुँलीखेल र काठमाडौं वरिपरीका स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको भिड लागेको छ । आफ्नै प्रदेश भित्रपनि विराटनगरको मान्छे भेडेटार जाने, झापाको मान्छे इलाम जाने, नेपालगञ्जको मान्छे रारा जाने यो प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउँछ । त्यसकारण अब सातै प्रदेशका पर्यटन गन्तव्यलाई समान महत्वका साथ विकास गर्नुपर्छ ।
विदेशी पर्यटन नआउन्जेल आन्तरिक घुमफिर प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत रहेन, यसका लागि अब निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ, सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारको तर्फबाट बिदा पर्यटनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । यो भनेको घुमफिरका लागि निश्चित रकम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई आन्तरिक गन्तब्यमा पठाउनु हो । यसले एकातर्फ सरकारी कर्मचारीको कार्यबोझ केही हलुका हुन्छ । घुमफिरबाट फर्किएपछि उनीहरु तनावमुक्त भई पुनः काममा खटिन सक्छन् । अर्कोतर्फ व्यवसायीले थोरै भएपनि विजनेश पाउँछन् ।
व्यवसायीले विजनेश पाउनुको मतलव कर र अन्य विभिन्न माध्यमबाट राज्यले पुनः लाभ लिन्छ । यसले सबैलाई फाइदा गर्छ । अर्कोतर्फ निजी र सामुदायिक क्षेत्रले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई रकम नै दिएर घुमफिरमा पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
किनकी ठूला व्यवसायिक घरानाले विगतमा आफ्नो कर्मचारीलाई समुह बनाएर विदेश घुम्न पठाउने गरेका थिए । केही समय अब नेपाल भित्रै यो माहौल बनाऔं न । यसले मुलुकको आन्तरिक पर्यटनलाई माथि उकास्न निकै सहयोग गर्छ । सरकारले नीति नियम बनाएर नियमित नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले डलरको मात्रै लोभ नगरी आन्तरिक पर्यटकलाई उत्तिकै महत्व दिने हो भने हामी नेपाल भित्रै पर्यटकीय माहौल निर्माण गर्न सक्छौं ।
यसका लागि नाट्टाले के पहल गर्दैछ ?
नाट्टा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने समितिमा छ । यस संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा हाम्रो सबै साथिहरु आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहनुभएको छ । हाम्रो काम भनेको पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारसँग मिलेर यस क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो । हामी यसमा काम गरिरहेका छौं ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा बनाइरहेको आन्तरिक पर्यटनको भ्रमण प्याकेज कहिलेसम्म आउँछ ?
निजी क्षेत्रका प्रदेश समितिहरुबाट हामीले स्थानीय व्यवसायीसँगको समन्वयमा प्याकेज मगाएर त्यसलाई एकिकृत गरी पर्यटन बोर्डलाई बुझाएका छौं । यसमा पर्यटन व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल तथा टूर, यातायात सबै क्षेत्रका व्यवसायीले सहभागिता जनाउनु भएको छ । हरेक प्रदेशमा घुम्नलायक स्थान छनोट गरी आकर्षक प्याकेज बनिरहेका छन् । यसलाई अन्तिम रुप दिने काम पर्यटन बोर्डबाट भइरहेको छ । त्यसपछि सात वटै प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र समेट्ने गरी प्याकेज सार्वजनिक हुन्छ ।
नेपालीहरु प्याकेज बीनै घुमफिरमा निस्कन्छन्, यसले व्यवसायीलाई त फाइदा हुँदैन नै, यात्रुले पनि दुखः पाउँछन्, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
विदेशीहरु घुमफिरमा निस्कनु अगाडी ६ महिना पहिले नै योजना बनाउँछन् । योजनावद्ध रुपमा घुमफिरमा निस्कन्छन् । पुरै बन्दोवस्तीका साथ निस्कन्छन् । त्यसकारण उनीहरुले कम जोखिम मोल्नुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो संस्कार नै छैन । आज योजना बनाएर हामी तत्काल घुमफिरमा निस्कन्छौं । यसले कुनै बेला जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण प्याकेजमा जान नेपालीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबाट एकातर्फ खर्च केही सस्तो पर्छ, भरपर्दो हुन्छ, समस्या आइपरे ट्राभल एजेन्सी जिम्मेवार हुन्छ । उसैले व्यवस्थापन मिलाउँछ । उदाहरणका लागि बाटोमा गाडी बिग्रियो भने ट्राभल एजेन्सी नै जिम्मेवार हुन्छ ।
त्यसरी ग्राहक अर्थात नेपाली पर्यटकलाई व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड र नेपाल सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो । र त्यो काम हामी गर्दै छौं । अब भोलिका दिनमा एक्लै जाने भन्दापनि प्याकेज लिएर भ्रमण गर्ने साथीहरु धेरै निस्कन्छन् । किनभने विश्वासिलो, झन्झट रहित सहज हुनुका साथै प्याकेजमा सस्तो पर्छ ।
पछिल्लो समय हवाई कम्पनीहरुले घुमफिरलाई सहज पुग्नेगरी आर्कषक प्याकेज ल्याइरहेका छन्, यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा कति सहयोग पुग्ला ?
यस्ता प्याकेजहरु कोरोनाबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा केही राहत पुग्ला भनेर ल्याएको प्याकेज हुन् । बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले प्याएका प्याकेज उहाँहरुले आफ्नो कम्पनीको प्रचारको लागि ल्याउनु भएको हो । जब ट्राभल एजेन्सीहरुले प्याकेज बेच्न थालेपछि उहाँहरुलाई आफ्नो टिकट बेच्नै फुर्सद हुँदैन । यो वातावरण अब बन्दै जान्छ । ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो काम गर्छ, एयरलाइन्सले आफ्नो काम गर्छ । यस्ता प्याकेजले यात्रुलाई घुमफिरमा प्रेरित पनि गर्छ ।
यो वर्ष तपाईंको आफ्नै घुमघामको योजना छ की छैन् ?
म रारा जाने योजनामा थिए । रारा म पछिल्लो वर्ष पनि गएको थिए । यो वर्ष भने सुर्खेत हुँदै रारा गएर धनगडी फर्कर्ने योजना बनाएको छु ।
आम यात्रुलाई तपाईको केही सन्देश छ ?
नेपाल प्रकृतिको एक सुन्दर उपहार हो । यहाँ पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अनगिन्ती हेर्न र घुम्नलायक स्थान छन् । हरेक स्थानमा मौलिक परम्परा र खानाका परिकार पाइन्छ । अहिले अधिकांश स्थानमा सरल पहुँचको पनि सुविधा छ ।
पूर्वाधार बनिरहेका छन् । त्यसकारण म सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न निस्कन आह्वान गर्छु । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिऊँ । हामीपनि घुम्ने बाँनी बसालौ । हामी नेपाली नै मिलेर यस्तो माहौल बनाऔं की भोली विदेशी पर्यटकलाई नेपाल खोजी खोजी आउनु पर्ने गन्तब्य बनोस ।